शरीरिक स्वास्थ्यका लागि खनपानका १० सर्तहरु !! | सुदुरपश्चिम खबर
शरीरिक स्वास्थ्यका लागि खनपानका १० सर्तहरु !!
खाना नै शरीरको सम्पूर्ण उर्जा र प्राणको स्रोत हुन् । भनिन्छ, हामी जस्तो खान्छौं त्यस्तै हुन्छौं । खराब खानपानले रोगी हुन्छौं, सही खानपानले निरोगी एवं तन्दुरुस्त । यो सामान्य ज्ञान सबैमा छ ।
३. मन लगाएर खाऔं
हामी सम्पूर्ण रुपमा आफै उत्पादन गरेर खानेकुरा खान सक्दैनौं । कतिपय खानेकुराको लागि बजारमा निर्भर हुनुपर्छ । यद्यपि बजारबाट खानेकुरा खरिद गरिरहँदा त्यसको शुद्धता, गुणस्तर, उत्पादन मिति आदिमा ध्यान दिनैपर्छ । (अनलाइनखबर बाट सभार)